Hlola iHawaii, Usa - World Tourism Portal
Hlola iHawaii, Usa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeHawaii
Bukela ividiyo ekhuluma ngeHawaii
Hlola iHawaii, isimo se-50th sase-United States of America. Iphakathi kweHawaii, esesendaweni ecishe ibe maphakathi nenyakatho yolwandlekazi lwePacific I-Polynesia. Ngenkathi bekulokhu kuyimbangela enkulu yezimboni zezinwele, ushukela kanye nophayinaphu, manje kuncike kwezomnotho kwezokuvakasha nakwezempi yase-US. Ubuhle bemvelo beziqhingi buyaqhubeka bungenye yezimpahla ezinkulu kakhulu zaseHawaii. Honolulu inhlokodolobha yombuso, idolobha elikhulu kunawo wonke, kanye nehabhu yamasiko. IsiHawaii nesiNgisi yizilimi ezisemthethweni zaseHawaii.
IHawaii indawo okwakukhona kuyo iziqhingi zezintaba-mlilo ezingaphezu kweziyishumi nesishiyagalolunye ezihlukile endaweni “eshisayo” eCentral Pacific. Ipuleti lasePacific iziqhingi ligibela kulo liya enyakatho-ntshonalanga, ngakho ngokuvamile iziqhingi zindala futhi zikhulu (ngenxa yokuguguleka) njengoba usuka eningizimu-mpumalanga uye enyakatho-ntshonalanga. Kukhona eziyisishiyagalombili iziqhingi ezinkulu zeHawaii, eziyisithupha zazo zivulekele ezokuvakasha.
Honolulu - Inhlokodolobha yesifundazwe nedolobha elinabantu abaningi
Kahuku - ku-Oahu
Kailua - ku-Oahu
U-Lihue (waseHawaii: Līhuʻe) - eKauai
ULahaina (waseHawaii: uLāhainā) - eMaui
Kahului - eMaui
I-Wailuku - eMaui
IHilo - idolobha elikhulu kunawo wonke esiQhingini Esikhulu
Kailua-Kona - Esiqhingini Esikhulu
I-Ala Kahakai National Traoric Trail esiQhingini Esikhulu.
IHaleakala National Park eMaui
IHawaii Volcanoes National Park esiQhingini Esikhulu
I-Kalaupapa National Historical Park eMolokai
IPu'uhonua o Honaunau National Historical Park esiQhingini Esikhulu
I-USS Arizona Isikhumbuzo Sikazwelonke ku-Oahu
I-Waimea Canyon eKauai
I-NaPali Coast e-Kauai
Isikhungo samagugu eNyakatho ye-Hawaii Yezemfundo kanye Nesikhungo Sokucwaninga esiQhingi Esikhulu
Lapho ezokuvakasha zithinteka khona, iHawaii inokuthile kuwo wonke umuntu. Isiqhingi sase-Oahu, esihlala abantu abaningi futhi esiyikhaya enhlokodolobha yezwe nedolobha elikhulu kunazo zonke i-Honolulu, sihle kubantu abafisa ukubona iziqhingi futhi baqhubeke nokusebenziseka kwedolobha elikhulu. Amahlathi emvula nemizila ehamba ezintabeni itholakala imizuzu nje ukusuka eWaikiki Beach, enye yezindawo ezihamba phambili zokuvakasha emhlabeni. Ebusika, amagagasi amakhulu ogwini olusenyakatho lwe-Oahu aguqula indawo evame ukulala ibe yinhloko yezwe yomhlaba.
Ngakolunye uhlangothi, labo abafisa ukubona iHawaii ngejubane elincane, bayobe benza kahle ngokuvakashela esinye seziqhingi eziseduze ne-Oahu). Zonke iziqhingi ezingomakhelwane zinikeza amathuba okuphumula nokujabulela ilanga nendawo. Iningi lezimangaliso zemvelo zeziQithi zitholakala eziqhingini zaseNeborbor, ukusuka eWaimea Canyon eKauai, eHaleakala eMaui, eHawaii Volcanoes National Park esiQhingini Esikhulu saseHawaii. Izimpophoma eziningi kanye namahlathi emvula kukhumbuza ukuthi iziqhingi zazingabukeka kanjani ngaphambi kokuba izinkampani ezinkulu zibheke eHawaii. Umgwaqo oya kuHana ungenye yezindawo ezinhle kakhulu eMaui, njengoba ulawula abaningi baphenduka ogwini olusempumalanga lwalesi siqhingi. Kukuholela ngaphezu kwamabhuloho kanye nezimpophoma ezinhle zangesikhathi esedlule. Ekugcineni, ungagcina e-Oheo Gulch Pools (ezingcwele futhi zingaphezu kwesikhombisa, kodwa futhi waziwa ngegama lePhoyinti Elingcwele), lapho ukuhamba izintaba kuyinto isipiliyoni impela.
Abantu basePolynesia bathuthela, baqala ukwakha imiphakathi esiqhingini saseHawaii ngaphambi kokufika kukaCaptain James Cook e-1778, owaziwa kakhulu njengesivakashi sokuqala saseYurophu kulezi ziqhingi. Ngaleso sikhathi, isiqhingi ngasinye sasingumbuso ohlukile. Ngokuxhaswa kwabeluleki nezikhali zasentshonalanga, uKamehameha I wesiqhingi saseHawaii wanqoba zonke iziqhingi ngaphandle kukaKauai, owathobela umbuso wakhe e1810.
Kuyo yonke le minyaka, amaketanga amaningi amakhulu okuthengisa anwebise ubukhona bawo eHawaii, enza iziqhingi zibukeke njengezwekazi laseMelika njalo, ngokuchithela amabhizinisi endawo. Noma kunjalo, iHawaii ihlala inempilo yamasiko. Inani labantu bakhona, abavela kumaHawaubau amaNdiya, abasebenzi bokuqala bamahlathi, kanye nabasanda kufika, futhi lapho kungekho neqembu elilodwa elinabaningi, kuvame ukuboniswa njengesibonelo sokusebenzelana kwamasiko ngokusemandleni. Kukhona ukuzibophezela okuqinile kokuqhubekisela phambili amasiko endabuko yamaHawaii, kanye namagugu amasiko emiphakathi eminingi yabahlali baseHawaii abavela ePacific, e-Asia naseYurophu. Futhi ngokuqinisekile imvelo inesifiso sokuphila isikhathi eside… IHawaii inesibalo eside kunazo zonke sokuphila okulindelwe kunoma yisiphi isimo sase-US.
Iziqhingi zithola imisebe eminingi yokukhanya kwelanga nemvula, imvula inazo zonke iziqhingi ezisenyakatho nasempumalanga yeziqhingi, ezibhekene nemimoya yokuhweba yangasempumalanga yangasentshonalanga (uhlangothi "oluvunguza" lwalesiqhingi), kanye neziqongo zezintaba kanye izigodi.
Izindiza eziningi ezisuka ezweni laseMelika cishe kuzo zonke izindiza zomhlaba wonke Honolulu esiqhingini sase-Oahu.
Ukuqashiswa kwezimoto kufanele kubhukelwe masisha ngangokunokwenzeka njengoba intengo ekhokhisiwe isuselwa kunsizakalo / kwesidingo.
Kunamabhange amaningi, ama-ATM, kanye namahhovisi okushintsha imali kuwo wonke amadolobha. Ama-ATM ayindlala eNorth Shore yase-Oahu nakwezinye izindawo zasemakhaya.
Enye yezinto eziyisikhumbuzo ezaziwa kakhulu ukuzithenga eHawaii yizinto zokugeza ezenziwe ekhaya nezomzimba. Lezi ziqhingi zibonisa amakha ayingqayizivele futhi aqabulayo emhlabeni ongawathola kalula kuma-shampoos waseHawaii, omningi omzimba, insipho, uwoyela, impepho, amakhandlela ezintantayo nokunye okuningi.
Iziqhingi zaseHawaii zinikeza imisebenzi eminingi. Izifundo zomdanso weHula nezifundo Ukulele zithandwa kakhulu phakathi kwabavakashi. Ukuvakasha ngezinyawo nokuvakasha kwe-eco kuyathandeka eziqhingini eziningi, kunamathuba okugibela amahhashi, i-ATV, izinkambo zomoya, nezinye izindlela zokuhlola ukubuka komhlaba. Iminyuziyamu neziza zomlando njengePearl Harbour nazo zitholakala kuzo zonke iziqhingi. Imisebenzi yamasiko efana ne IsiPolynesia Isikhungo Samasiko e-Oahu sibuye senze imisebenzi ethokozisayo yosuku lonke.
I-Oahu idume ngohambo lwePearl Harbour, kodwa futhi ithandwa kakhulu ngoshaka abadonsela izinyoni emakhejini, ukuvakasha kwe-Waikiki snorkel kanye nasezindaweni ezizungeze i-Oahu lapho uzobona khona konke okuvelele kwe-Oahu kufaka iDiam Head Head, iNorthrere neDole Plation lapho ukwazi khona izinto eziyisampula zemenyu ezenziwe ngophayinaphu abasha abasha.
IMaui indawo yokubukwa komkhomo we-humpback whale kusuka ngoDisemba 15 kuya ku-Ephreli 15 unyaka ngamunye njengoba ama-humpbacks amakhulu athuthela emanzini afudumele waseHawaii ukuzala amathole awo. Okunye okudumile futhi okuvela eMaui yiMolokini Crater okuyi-cranco crater engaphansi kwengxenye ethile ongayicwilisa kuyo.
IKauai ayithunywanga futhi yinhle. Kuvezwe ezithombeni eziningi ezinyakazayo emashumini amabili edlule. Bona lesi siqhingi ngezwe noma ngendiza ukuthatha ubuhle bangempela balesi siqhingi.
Isiqhingi Esikhulu siyisiqhingi sentaba-mlilo lapho ungathatha khona uhambo lomhlaba noma undize phezu kwentaba-mlilo enkulu emangalisayo kohambo lwendiza enophephela emhlane. Iminyango ezindiza izindiza ikuvumela ukuba uzwe ukushisa okuvela kwi-volanco, okuhlangenwe nakho okumangazayo okumangalisayo. Futhi esiQhingini Esikhulu uthola ithuba eliyivelakancane lokubhukuda namahlengethwa asendle, hhayi athunjiwe.
IHawaii yaziwa kakhulu ngamabhishi ayo kanye nemisebenzi yamanzi. Ukushushuluza kuyinkolo ethile eHawaii, futhi amathuba okutshuza e-scuba kanye ne-snorkilla akhona cishe kuyo yonke indawo. Ngaphezu kwalokho, ukushushuluza i-jet, i-parasailing ne-kayaking kuyatholakala ezindaweni zabavakashi.
Ukuthi udlani futhi uphuze eHawaii
IHawaii akuyona indawo enhle e-US yokugembula. Ngokungafani nama-48 amaningi aphansi, iHawaii ingenye yezindawo ezimbalwa zaseMelika ezinomthetho oqinile oqinile wokulwa nokugembula kwanoma yiluphi uhlobo. Zonke izinhlobo zokugembula azikho emthethweni eHawaii, futhi akunconywa ukuthi uhlanganyele kunoma yimuphi umsebenzi wohlobo lolo. Eqinisweni, ukukhuthaza ukugembula kunoma yiliphi izinga kuyisigaba C felony esifundazweni.
Lapho uya ogwini / ukubhukuda noma ukuchitha isikhathi eside elangeni, gqoka njalo ilanga elangeni noma unogada welanga ukuvikela isikhumba sakho ekushisweni. Ungalibukeli phansi ilanga laseHawaii; Inkomba ye-UV ray iba phezulu kakhulu unyaka. Imisebe ye-UV nayo idlula emafwini, ukuze ukwazi ukushiswa yilanga ngezinsuku ezinamafu noma okugcwele kakhulu.
Yazi ukuthi i-jellyfish yebhokisi ifika ngasosebeni lolwandle emabhishi kulo lonke izwe mayelana nezinsuku ze-7 kuya ezinsukwini ze-10 ngemuva kwenyanga egcwele inyanga nenyanga. Ukugwazwa kwebhokisi le-jellyfish kunobuhlungu obukhulu futhi kubuhlungu, kepha kuyaqabukela kubulale abantu. Hlala ulalele abagadi bezempilo ngoba bazokwazi ngezimo ze-jellyfish futhi baqeqeshelwe ukunikeza usizo lokuqala ngokuqina.
Njengomkhuba emazweni amaningi ase-Asia, ngaso sonke isikhathi susa izicathulo zakho lapho ungena ekhaya lesakhamuzi esiqhingi, uma simenyiwe.
Akhiwe maphakathi nePacific Ocean Hawaii onomakhelwane abambalwa abaseduze.
California - Iphuzu lokusuka kwezivakashi eziningi ezivela ezwenikazi laseMelika.
Hlola iHawaii indawo eshibayo eya eziqhingini eziningi zePacific kanye namazwe e-Australia, E-New Zealand futhi Japan.